Maraykanka oo bilaabay inuu ciidammadiisa kala baxo Afghanistan | Xaysimo
Home War Maraykanka oo bilaabay inuu ciidammadiisa kala baxo Afghanistan
Maraykanka oo bilaabay inuu ciidammadiisa kala baxo Afghanistan
Maraykanka ayaa bilaabay inuu ciidammadiisa sa kala baxo Afghanistan, tan oo qayb ka ah heshiish at Taliban la galeen, oo looga gol lahaa in nabad laga dhaliyo dalkani.
Maraykanka ayaa heshiiskaas ku galay, si uu u yareeyo ciidammadiisa gaadhaya 12,000 isaga oo gaadhsiinaya 8,600 inta lagu gudo jiro 135 cisho ee uu ka dhaqan gelayo heshiiskaasi.
La bixidda ciidammadan ayaa ah xaalad muhiim u ah heshiiskan taariikhiga ah ee ay wada galeen US iyo Taliban 29-kii bishii February.
Xukuumadda Afghanistan ayaan qayb ka ahayn heshiiskan, laakiin waxaa la rajeynayaa inay wadahadal la yeelan doonto Taliban.
Madaxweynaha Afghnaistan, Ashraf Ghani, ayaa hore u sheegay inuusan u hogaansami doonin heshiis lagu siidaayo maxaabiista Taliban taas oo shuruud u ah wadahadallada tooska ah ee lala galayo kooxdaan.
Laakiin warar ayaa sheegaya in madaxweynahan dib loo caleemo saaray mar labaad maalintii isniintii, uu soo saari doono amar ku saabsan ugu yaraan 1,000 maxbuus ooTalibaan ah in la siidaayo toddobaadkan.
Ashraf Ghani ayaa loo dhaariyay madaxweyne iyadoo qofkii la tartamayay uu samaytay xaflad isaga u gaar ah oo ka agdhow
Heshiiska nabadda ayaa u muuqday mid jilicsan usbuucii la soo dhaafay ka dib markii Mareykanku uu bilaabay duqeyn dhanka cirka ah isagoo ka jawaabaya dagaalyahannada Taliban ee weeraraya ciidammada Afghanistan ee gobolka Helmand.
Kooxda Taliban ayaa ku baaqday xasillooni isniintii, Col Sonny Leggett, oo ah afhayeenka ciidammada Mareykanka ee Afghanistan, ayaa iyana kaga jawaabay bilaabidda wejigii koowaad ee bixitaanka Mareykanka.
Mareykanku wuxuu haystaa “dhammaan millateriga iyo mas’uuliyiinta si ay u fuliyaan himilooyinkeenna” Afghanistan inkasta oo ay baxayaan ciidamada, Col Leggett ayaa uu ku yidhi bayaan ay soo saareen.
Mareykanka iyo xulafadiisa Nato waxay ku heshiiyeen inay la baxaan dhammaan ciidammadooda muddo 14 bilood gudahood ah haddii Taliban oggolaadaan heshiiska.
Image captionTaliban oo la dabbaal degaya heshiiska Maraykanka
Sida ku xusan heshiiskaas, dagaalyahannada Taliban ayaa lagula heshiiyey inay ka fogaadaan weerarrada ay qaadaan sidoo kale aysan u oggolaan al-Qaacida ama kooxaha kale ee xag-jirka ah inay ka shaqeeyaan aagagga ay ka taliyaan.
Mareykanka ayaa weerarey Afghanistan usbuucyo ka dib markii Al-Qaacida weerartay New York bishii september 2001, markaas kaddib waxa uu salka dhigtay Afghanistan. wuxuuna xukunka ka tuuray dowladdii Taliban, isagoo sababta ku sheegay in dagaalyahannadu ay gabbaad siiyeen shabakadda al-Qaeda si ay u abaabulaan weerarradii Mareykanka lagu qaaday 11-kii September, laakiin waxay noqdeen xoogag muquunis ah oo ilaa iyo 2018 ka jirey in ka badan saddex-meeloodow laba meel waddanka.
In ka badan 2,400 oo ciidammada Mareykanka ah ayaa la diley tan intii uu socday khilaafkaasi.